vendredi, 07 juin 2019 21:18
Faritra 67ha: Nakaton’ny Polisy izay toeram-pisotroana alim-pihidy
Nakaton’ny Polisy avy ao amin’ny Kaomisarian’ ny Boriborintany fahafito avokoa ireo toeram-pisotroana sy toeram-pialamboly eny amin’ny faritra 67ha izay mbola nivoha aorian’ny 09 ora alina.
Ho fampianarana ireo mpivarotra hanara-dàlana sy hitandroana ny filaminana ary hiarovana ireo olona mody amin’ny alina moa no anton’izao hetsika izao.
Nahatratra 22 ireo olona notazomina tany amin’ny biraon’ny polisy nandritra izany hetsika izany ary maro amin’izy ireo no tsy nitondra kara-panondro.
vendredi, 07 juin 2019 21:14
Ho an’ireo saina vita amin’ny taratasy, na lamba na vy dia Pantone ny loko ampiasaina ka Cool grey 1 ny karazan’ny loko fotsy, 185C ny loko mena ary 355C ny loko maitso. Ireo no ekena fa loko tena maneho ny sainam-pirenena Malagasy ary tokony ampiasain’ny rehetra manomboka izao.
vendredi, 07 juin 2019 21:03
Foloalindahy Malagasy: Hatao ny 11, 12, 13 jona 2019 ny fifaninanana handraisana mpanamory angidimby
20 ireo mpiadina ho mpanamory angidimby hiatrika ny fifaninanana ho tontosaina amin’ny 11, 12, 13 jona 2019.
Miara-miasa akaiky amin’ny fandavorariana ity fanadinana ara-panjakana ity ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Minisiteran’ny Asa sy ny Lalàna Sosialy ary ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na ny BIANCO, izay hisahana ny fanarahamaso ny fifaninanana.
Nahazo angidimby ny Foloalindahy Malagasy hanamorana ny fanaovana ny asa fampandriana fahalemana an’i Madagasikara. Izany no isan’ny antony hanaovana izao fifaninanana izao.
vendredi, 07 juin 2019 21:01
Nosy Be: Nofoanan’ny Fanjakana ny fifampiraharahana amin’ny orinasa mamokatra herinaratra
Takapa nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly, araka ny volavolan-kevitra naroson’ny ministeran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo, ny fanafoanana ny didim-pitondrana mametraka ny fifampiraharahana amin’ny orinasa mamokatra herinaratra aty Nosy Be, Faritra DIANA.
«Ny tsy fahatomombanan’ny asa sy ny famatsiana herinaratra», no voalaza fa anton’io fanafoanana ny fifanarahana io.
vendredi, 07 juin 2019 19:44
Theresa May: Handao tanteraka ny toerana maha praiminisitra anglisy azy
Andranomaso no nanambaran’i Theresa May, tamin’ny 24 mey 2019, fa mametra-pialana tsy ho praiminisitra ny tenany ary tsy ho mpitantana ny antoko « Conservateurs » any Royaume Uni. Mihatra manomboka anio 7 jona 2019 io fametraham-pialany io.
Taorian’ny fitsapankevi-bahoaka tamin’ny 2016 hisintahan’ny Anglisy eo anivon’ny Vondrona Eorôpeana no nitarika an’i Theresa May, minisitry ny Ati-tany tamin’izay, ho eo amin’ny toeran’ny praiminisitra.
Tsy naharesy lahatra ny Parlemanta anefa ny drafitra narosony ho fanatanterahana an’io fisintahana io. Telo taona ngarangidina nihodinkodina teo, hany ka naleony nametra-pialana.
vendredi, 07 juin 2019 19:36
RNM: Voatendry ho Tale Livanandrasana Razafindramaro Sehenoarivony
Rtoa Livanandrasana Razafindramaro Sehenoarivony no hisolo toerana an’i Harrison Ratovondrahona.
vendredi, 07 juin 2019 19:32
Televizionina Malagasy: Voatendry ho Tale i Andrianarijaona Herizo Victor
Atoa Andrianarijaona Herizo Victor no mandimby toerana an’i Herinirina Lalao Razafimahefa amin’ny toeran’ny Talen’ny Televizionina Malagasy ao anatin’ny ORTM.
vendredi, 07 juin 2019 19:15
OTIV Boeny: Andrasana anio ny vahaolana
Tapitra amin’ity zoma 7 jona 2019 ity ny fe-potoana nomen’ny filoha Andry Rajoelina ireo tompon'andraikitra roa tao amin’ity OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola) Boeny ity, navoriny tao amin’ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra ny harivan’ny Talata 4 jona 2019, natrehin’ny solontena roa avy amin’ny Vaomiera mpanaramaso ny banky sy sehatra fampindramambola, handrosoan’izy ireo ny drafitra hamerenana ny volan’ireo mpikambana mitaraina fa very vola na mihitsoka tsy azo ao amin’ny OTIV Boeny ny tahirim-bolany efa aman-taonany izao.
Nanome fe-potoana hatramin’ity anio Zoma 7 jona ity ny filoha Rajoelina iandrasany ny vahaolana.
vendredi, 07 juin 2019 19:11
Ahmad, filohan’ny CAF: Navotsotry ny Fitsarana frantsay rehefa tsy hita izay vesatra itazomana azy
Omaly ihany dia navotsotry ny Fitsarana frantsay miady amin’ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna ara-bola sy ara-ketra i Ahmad Ahmad, filohan’ny Kaofederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF), rehefa tsy hita izay vesatra itazomana azy.
Omaly alakamisy 6 jona maraina i Ahmad no nalain’ny Polisy frantsay tao amin’ny “Hôtel de Berri”, hotely nipetrahany ao Paris, hanaovana fanadihadiana noho ny fitoriana nataon’ny orinasa Puma azy, rehefa tsy faly tamin’ny nanapahan’ny CAF samirery ny fiaraha-miasa taminy ity orinasa alemana mpanamboatra fitaovana ara-panatanjahantena ity, ka nosoloana orinasa frantsay Tactical Steel.
Nametraka fitoriana ny Puma. Nahiahiana ho nisy kolikoly tao ambadik’izao fanilihana azy ka nampidirana ity orinasa frantsay ity. Manokatra